Iindaba -umahluko phakathi kwe2.4GHz kunye ne5GHz
Umahluko phakathi kwe2.4GHz kunye ne5GHz
Okokuqala, kufuneka sikwenze kucace ukuba unxibelelwano lwe5G alufani ne5Ghz Wi-Fi esiza kuthetha ngayo namhlanje. Unxibelelwano lwe-5G ngokwenyani sisishunqulelo senethiwekhi yeselfowuni yesi-5, ebhekisa ikakhulu kubuchwephesha bokunxibelelana kweselula. Kwaye i5G yethu apha ibhekisa kwi5GHz kumgangatho weWiFi, obhekisa kwisiginali yeWiFi esebenzisa ibhendi ye5GHz yokuhambisa idatha.
Phantse zonke izixhobo ze-Wi-Fi kwintengiso ngoku zixhasa i-2.4 GHz, kwaye izixhobo ezingcono zinokuxhasa zombini, ezizezi, i-2.4 GHz kunye ne-5 GHz. Ezi routers zibanzi zibizwa ngokuba zii-routers ezingenazingcingo zombini.
Masithethe nge-2.4GHz kunye ne-5GHz kwinethiwekhi ye-Wi-Fi engezantsi.
Ukuphuhliswa kwetekhnoloji yeWi-Fi inembali yeminyaka engama-20, ukusuka kwisizukulwana sokuqala se-802.11b ukuya kwi-802.11g, 802.11a, 802.11n, nakwi-802.11ax yangoku (WiFi6).
I-wireless ye-WiFi sisifinyezo nje. Ngokwenyani iseti esezantsi yomgangatho wenethiwekhi yendawo engenazingcingo eyi-802.11. Okoko yazalwa ngo-1997, ngaphezulu kweenguqulelo ezingama-35 zobukhulu obahlukeneyo ziye zaphuhliswa. Phakathi kwazo, i-802.11a / b / g / n / ac iphuhlisiwe iinguqulelo ezintandathu ezingaphezulu.
IEEE 802.11a ngumgangatho ohlaziyiweyo womgangatho wokuqala wo-802.11 kwaye wavunywa ngo-1999. Umgangatho we-802.11a usebenzisa umgaqo-nkqubo ofanayo kunye nomgangatho wokuqala. Ukuhamba rhoqo kwe-5GHz, i-52 orthogonal frequency division sublexriers iyasetyenziswa, kwaye elona zinga liphezulu lokuhambisa idatha yi-54Mb / s, efezekisa ukuhanjiswa okuphakathi kwenethiwekhi. (20Mb / s) iimfuno.
Ngenxa yokuxinana kwebhendi ye-2.4G, ukusetyenziswa kwebhendi yamaza e-5G luphuculo olubalulekileyo lwe-802.11a. Nangona kunjalo, ikwazisa iingxaki. Umgama wokuhambisa awulunganga njenge-802.11b / g; ithiyori, imiqondiso ye-5G kulula ukuyivimba kwaye ifunxwe ziindonga, ke ukugubungela i-802.11a akulunganga njenge-801.11b. I-802.11a inokuphazanyiswa, kodwa ngenxa yokuba kungekho zimpawu zininzi ziphazamisayo kufutshane, i-802.11a ihlala inegalelo elingcono.
IEEE 802.11b ngumgangatho wenethiwekhi yendawo engenazingcingo. Ukuhamba rhoqo yi-2.4GHz, enokuthi ibonelele ngesantya sokuhambisa esi-1, 2, 5.5 kunye ne-11Mbit / s. Ngamanye amaxesha kubhalwe ngokungachanekanga njenge-Wi-Fi. Ngapha koko, iWi-Fi luphawu lwentengiso lweWi-Fi Alliance. Olu phawu lwentengiso luqinisekisa kuphela ukuba iimpahla ezisebenzisa uphawu lwentengiso zinokusebenzisana kunye, kwaye azinanto yakwenza nomgangatho ngokwawo. Kwibhendi yokuhamba rhoqo ye-2.4-GHz ISM, kukho iindlela ezili-11 zizonke kunye ne-bandwidth ye-22MHz, eyi-11 egqagqeneyo yokuhamba rhoqo. Umlandeli we-IEEE 802.11b ngu-IEEE 802.11g.
IEEE 802.11g yapasiswa ngoJulayi 2003. Ubuninzi bomphathi wayo yi-2.4GHz (efanayo ne-802.11b), itotali yeebhendi ezili-14, isantya sokuhambisa sokuqala yi-54Mbit / s, kwaye isantya sokuhambisa nge-net simalunga ne-24.7Mbit / s (ngokufanayo ne-802.11a). Izixhobo ezingama-802.11g ziyehla ziyahambelana ne-802.11b.
Emva kwexesha, abanye abavelisi be-router abangenazingcingo bakhulisa imigangatho emitsha esekwe kwimigangatho ye-IEEE 802.11g ekuphenduleni kwiimfuno zentengiso, kwaye yonyusa isantya sokudluliselwa kwethiyori ukuya kwi-108Mbit / s okanye kwi-125Mbit / s.
IEEE 802.11n ngumgangatho ophuhliswe ngesiseko se-802.11-2007 liqela elitsha elisekwe yi-IEEE ngoJanuwari 2004 kwaye lavunywa ngokusesikweni ngoSeptemba 2009. Umgangatho wongeza inkxaso kwi-MIMO, ivumela i-bandwidth engenazingcingo ye-40MHz, kunye nethiyori Isantya esiphezulu sothumelo ngama-600Mbit / s. Kwangelo xesha, ngokusebenzisa ikhowudi yebhloko yexesha-ecetywayo yi-Alamouti, umgangatho ukwandisa uluhlu lokuhambisa idatha.
IEEE 802.11ac ngumgangatho woqhakamshelwano lomnatha wonxibelelwano lwekhompyuter ongama-802.11, osebenzisa ibhendi yamaza ye-6GHz (ekwabizwa ngokuba yi-5GHz frequency band) kunxibelelwano lwengingqi olungenazingcingo (WLAN). Kwithiyori, inokubonelela nge-1 Gigabit ngebhendi nganye yenethiwekhi kwizitishi ezininzi zonxibelelwano lwendawo engenazingcingo (WLAN), okanye ubuncinci i-megabits ezingama-500 ngomzuzwana (500 Mbit / s) kuthungelwano olunye lokuhambisa.
Yamkela kwaye yandisa umxholo womoya ojongwayo ovela kwi-802.11n, kubandakanya: ububanzi bebhendi yeRF (ukuya kuthi ga kwi-160 MHz), imilambo yendawo engaphezulu ye-MIMO (inyuke yaya kwi-8), i-MU-MIMO, kunye nokuxinana okuphezulu (ukumodareyitha, ukuya kuthi ga kwi-256QAM ). Ngulowo uza kungena ezihlangwini ze-IEEE 802.11n.
Ngo-2017, uBroadcom wakhokela ekusunguleni i-802.11ax chip engenazingcingo. Ngenxa yokuba i-802.11ad yangaphambili yayiyeyona bhanti ye-60GHZ, nangona isantya sokuhambisa sasinyusiwe, ukugubungela kwayo kwakulinganiselwe, kwaye kwaba yitekhnoloji esebenzayo encedisa i-802.11ac. Ngokwiprojekthi esemthethweni ye-IEEE, isizukulwana sesithandathu se-Wi-Fi esizuza njenge-802.11ac yi-802.11ax, kwaye isixhobo sokwabelana esixhasayo sisungulwe ukusukela ngo-2018.
Isizukulwana sokuqala sokuhanjiswa kweengcingo ezingenazingcingo i-IEEE 802.11 sazalwa ngo-1997, izixhobo ezininzi ze-elektroniki ngokubanzi zisebenzisa i-2.4GHz frequency engenazingcingo, ezinje ngee-oveni ze-microwave, izixhobo zeBluetooth, njl.njl. Umqondiso uchaphazeleka ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, njengendlela eneenqwelo ezitsalwa ngamahashe, iibhayisekile kunye neemoto ezibaleka ngaxeshanye, kwaye nesantya sokuhamba kweemoto sichaphazeleka ngokwendalo.
I-5GHz WiFi isebenzisa ibhendi ephezulu yokuzisa ukungxinana kwesiteshi. Isebenzisa amajelo angama-22 kwaye ayiphazamisani. Xa kuthelekiswa nemijelo emi-3 ye-2.4GHz, kunciphisa kakhulu ukungxinana komqondiso. Ke inqanaba lokuhambisa le-5GHz yi-5GHz ngokukhawuleza kune-2.4GHz.
I-band ye-5GHz ye-Wi-Fi esebenzisa isizukulwana sesihlanu se-802.11ac protocol inokufikelela kwisantya sokuhambisa i-433Mbps phantsi kwe-bandwidth ye-80MHz, kunye nesantya sokuhambisa se-866Mbps phantsi komda we-160MHz, xa kuthelekiswa ne-2.4GHz inqanaba lokuhambisa elona liphezulu. izinga le-300Mbps liphuculwe kakhulu.
Nangona kunjalo, i-5GHz i-Wi-Fi ikwanazo neentsilelo. Iziphene zayo zilele kumgama wokuhambisa kunye nokukwazi ukuwela imiqobo.
Kungenxa yokuba i-Wi-Fi sisangqa sombane, eyona ndlela iphambili yokusasaza kukusasaza ngokuthe ngqo. Xa idibana nemiqobo, iya kuvelisa ukungena, ukubonakalisa, ukusasazeka kunye nezinye izinto. Phakathi kwabo, ukungena yeyona nto iphambili, kwaye indawo encinci yomqondiso iya kwenzeka. Ukubonakalisa kunye nokuphambuka. Iimpawu ezibonakalayo zamaza kanomathotholo kukuba asezantsi amaza, kokukhona ubude bebude, incinci ilahleko ngexesha lokusasazeka, ukubanzi ngokubanzi, kwaye kulula ngakumbi ukugqitha imiqobo; ukuphakama kwesantya, okuncinci kukugubungela kwaye kunzima ngakumbi. Jikeleza imiqobo.
Ke ngoko, umqondiso we5G onamaxesha aphezulu kunye nobude obufutshane bunendawo encinci yokugubungela, kwaye amandla okudlula kwimiqobo ayilunganga njenge-2.4GHz.
Ngokomgama wokuhambisa, i-2.4GHz i-Wi-Fi inokufikelela kwinqanaba eliphezulu leemitha ezingama-70 ngaphakathi, kunye nokugubungela ubuninzi beemitha ezingama-250 ngaphandle. Kwaye i-5GHz i-Wi-Fi inokufikelela kuphela kubuninzi beemitha ezingama-35 ngaphakathi.
Lo mzobo ungezantsi ubonisa uthelekiso lwe-Ekahau Site Survey yokugubungela phakathi kwe-2.4 GHz kunye ne-5 GHz yeebhendi zokuhamba zoyilo lokwenyani. Oluhlaza luhlaza mnyama kwezi zimbini zifanekisela isantya se-150 Mbps. Olubomvu kwimodeli ye-2.4 GHz ibonisa isantya se-1 Mbps, kwaye ebomvu kwi-5 GHz ibonisa isantya se-6 Mbps. Njengoko ubona, ukugubungela ii-2.4 GHz APs kukhulu kancinci, kodwa isantya emaphethelweni e-5 GHz sikhawuleza.
I-5 GHz kunye ne-2.4 GHz ziindlela ezahlukileyo ezahlukileyo, nganye kuzo inezibonelelo zonxibelelwano lwe-Wi-Fi, kwaye ezi zibonelelo zixhomekeke kwindlela oyilungiselela ngayo inethiwekhi ngakumbi xa ujonga uluhlu kunye nezithintelo (iindonga, njl. Njl. ukugubungela Ngaba kuninzi?
Ukuba ufuna ukugubungela indawo enkulu okanye ukungena okuphezulu kwiindonga, i-2.4 GHz iya kuba ngcono. Nangona kunjalo, ngaphandle kwale mida, i-5 GHz lukhetho olukhawulezayo. Xa sidibanisa izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga kwezi zimbini zala mabhendi kwaye sizidibanise zibe nye, ngokusebenzisa iindawo zokufikelela kwi-band ekufakweni ngaphandle kwamacingo, sinokuyiphinda kabini i-bandwidth engenazingcingo, sinciphise ifuthe lokuphazamiseka, kwaye sonwabele konke-ngeenxa zonke i-Wi engcono -Fi yenethiwekhi.
I-Shenzhen HUANET Technology CO., Ltd zibonelela ngazo zonke iintlobo ze-2.4 GHz kunye ne-5GHz ONU. Sikwabonelela ngeHuawei EG8145V5 kunye neZTE F670L ezimbini zebhendi ONT. Sicinga ukuba kufuneka kubekho imodeli enye ye-wifi ONT enokuhlangabezana nesicelo sakho.
Ixesha Post: Jun-09-2021
Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, I-Sfp C ++, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, IHuawei Qsfp +, Ixabiso leHuawei Olt,